Mpitantana loharanon-tsakafo - andraikitra
Miaina ny fiainana, miova ny fotoana, ary miaraka amin'izy ireo ny olona sy ny asany. Amin'ny vanim-potoana, manana fangatahana vaovao ny fiaraha-monina ary azo antoka fa mitaky fiovana sasantsasany izany. Vao haingana, mpitantana ny fitantanana olona maoderina, antsointsika hoe lehiben'ny sampan-draharaha na tsotra fotsiny - mpiandraikitra tompon'andraikitra amin'ny fanjakana. Saingy ankehitriny dia niova kely ny andraikitry ny manamboninahitra HR, ary nanomboka nametraka ny boky momba ny asa fotsiny ihany, ary araka ny fehezan-dalàna momba ny asa, nandefa ny mpiasa hialana sasatra.
Inona avy ireo andraikitry ny mpitantana ny HR?
Andao hiezahantsika hahatakatra ny maha-zava-dehibe ny androany. Voalohany, ny fifandraisany amin'ny olona, ​​izany hoe, ny fifantenana ny kandidà amin'ny toerana misy azy, mamorona rafitra iray ho famporisihana sy hanasaziana ny mpiasa, ary ny fitazonana sy ny fampivoarana ny orinasan'ny orinasa. Avy amin'ireto olona ireto ny habetsaky ny rivo-piainana ao amin'ny vondrona. Noho izany, ny manam-pahefana amin'ny tompon'andraikitra ao amin'ny HR dia ahitana ihany koa ny adidy hamolavola sy hampitaizana amin'ny mpiasa ny tanjona sy ny iraka entin'ny orinasa, hanatanterahana ireo asa izay hanampy amin'ny fanamafisana ny toe-tsaina anatiny ao amin'ny fikambanana, ary koa ny hampahafantarana amin'ny mpiasa tsirairay ny fanantenany amin'ny toerana misy azy. Eny, io asa io dia tsy mora ary mitaky fiofanana manokana sy fahaizana manokana.
Ny fepetra fototra takian'ny tompon'andraikitra momba ny fitantanana olona dia ny fampianarana ambony, mety ara-dalàna, ara-ekonomika, ara-psikolojika, pédagogique ary ara-barotra - amin'ny ankapobeny, amin'ny ankapobeny, saingy tsy maintsy ho lalina sy hentitra. Ny fiheverana manokana dia miankina amin'ny toetra ara-môraly. Ny mpiasa matihanina amin'ity orinasa ity dia tokony hikarakara, hahay handanjalanja, hifampiresaka ary hampihatra. Ny mpikarakara mpirahalahy dia tokony ho afaka hifandray tsara amin'ny olona sy ny olona miaraka aminy. Zava-dehibe ny tsy hisian'ny fiatrehana fifandraisana, satria maro ny miresaka momba ny fibodoana. Mila mihaino ny mpiasa ianao, manombantombana ny toetran'ny fitondran-tenany, afaka maminavina ny fahombiazan'ny profesora, ary indraindray aza manampy amin'ny torohevitra mahasoa. Saingy amin'ny fotoana iray, ny manam-pahaizana amin'izany dia tokony ho mpitantana tsara. Ny mpitantana ny mpiasa koa dia mitaky ny fahefana sy ny henjana, mba hahafahany miatrika ireo andraikitra.
Andraikitry ny mpitantana ny mpiasa
Ankehitriny, ireto fepetra sy andraikitra manaraka ireto dia apetraka amin'ny olona rehetra izay mifandray amin'ny asan'ny manampahefana HR amin'ny fomba iray na hafa:
Mijery ny tsenan'ny asa, manana ny vaovao momba ny toe-javatra misy amin'izao fotoana miaraka amin'ny mpiasa, ny karama midadasika eny an-tsena ary mampahafantatra izany mpitarika izany.
Raha ilaina, mandefa vaovao momba ny fahabangan-toerana ao amin'ny fampahalalam-baovao sy mitarika fanadihadiana miaraka amin'ny kandidà.
Ny fahafahana mamorona programa matihanina ho an'ny banga tsirairay, izany hoe, tsara ny mahafantatra hoe inona ny toetra maha-olona sy ny matihanina tokony ho kandidà ho an'ny toerana manokana.
Ny fandaharanasa fanomanana ny tetibola ho an'ny ho avy tsy ho ela sy amin'ny hoavy, ny famoronana tahirim-bola amin'ny mpiasa, ary koa ny fitadiavana ny vahoaka havanana.
Ny fahalalana ny lalàna momba ny asa, ny fototry ny fifandraisana amin'ny orinasa, ny asa miaraka amin'ny antontan-taratasy ary ny mamaky teny am-bava sy am-bava.
Famolavolana sy fanatanterahana ny fifanarahana, fifanarahana ary fifanekena arak'asa, fananganana sy fitantanana ny antontan-taratasy ataon'ny mpiasa.
Fandaminana fandaharanasa fandaharam-pianarana, fampiofanana, fampiofanana amin'ny fanatanjahan-tena, fanamarinana ny mpiasa, fampandrosoana, fandaminana ary fitarihana fampiofanana, programa sosialy.
Ny fanentanana ny mpiasa amin'ny orinasa, ny fitadiavana fomba iray ho azy ireo.
Ny fampiharana ny fanaraha-maso ny fanarahan-dàlana amin'ny fitsipika anatiny ataon'ny orinasa, mandray anjara amin'ny famahana ny olana amin'ny fifandirana sy ny fifandirana.
Ankoatr'izay, ny fananana fomba fisainana mamolavola, toe-tsaina mandanjalanja, fahatsiarovana maharitra sy miasa, ary koa ny fijerena sy ny fijerena maharitra.
Amin'ny ankapobeny, azo lazaina fa ny asan'ny manamboninahitra mpirotsaka an-tsitrapo dia fifangaroan-javatra mahavariana ny asa sy ny famoronana, fa tsy ny tsirairay no afaka miatrika azy ireo. Na izany aza, raha mahatsapa ny tanjaka ianao - sahy manandratra ny tampon'ny fitantanana.
Ahoana no hamonjena budget budget - tena torohevitra
Fankasitrahana sy tombontsoa ara-barotra
Ahoana no hanoratana ny autobiography?
Ahoana no hanoratana tranonkala iray?
Ahoana no ahitana asa tsy misy traikefa?
Adoption ny fanapahan-kevitry ny fitantanana
Tao anatin'ilay tambajotra no niseho ny tranofiara voalohany amin'ny horonantsary "Resident Evil-6" miaraka amin'i Milla Jovovich
Nanao fety hankalazana an'i Luke, zanany lahy i Hilary Duff sy ny vadiny taloha
Manao ahoana marina ny mandrisika ny alikaola ao anaty tavoahangy voatoto?
Inona no hanomezana ny fampakaram-bady ho an'ny orinasa sy ny tsy dia mahafa-po?
Akanjo hariva amin'ny ankizivavy feno
Ny teatra ao Rostov-on-Don
Toerana tsara indrindra any Indonezia